Yerera Chati Quality Management
Process Kuyerera Chart
Saka, isu kuita nokusika bhiriji, iyo anoshandura pfungwa dzako kana kugadzirwa kunyika chigadzirwa uye nechipo pamberi vatengi nokupa yakavimbika kugadzira mhinduro uye injiniya rutsigiro, kusanganisira New Product Introduction (NPi), Printed Circuit Board (pcb) design, Printed Circuit Board Assembly (PCBA), Casing (mapurasitiki & nepfungwa) mhinduro.
Tiri kupa pcb kugadzira uye ungano mabasa pakutevera vatengi guru munyika yose.
Tiri vakazvipira zvakazara kuva yako yakavimbika yemagetsi mukugadzira mabasa naye.
Ngatishandirei pamwechete fullfil pamusika zvinangwa zvako.
yakaderera mavhoriyumu kugadzirwa